Dawladda Jabuuti oo isha ku haysa xidhiidhka Soomaalia iyo Kenya oo dib u soo laabtay. – Xeernews24
13. Juni 2021 /in WARAR/NEWS /von admin
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa si rasmi ah uga hadashay dib u soo laabashada xidhiidhka Soomaaliya iyo Kenya iyadoo Jabuuti ayku xaglineysay Dowladda Federalka iney Kenya la safatay.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Jabuuti, Mudane Maxamuud Cali Yuusuf oo soo saaray war qoraal ayaa waxa uu soo dhoweeyey go’aanka kasoo baxay dowladda Soomaaliya ee dib loogu soo celinayo xidhiidhka ay la laheyd Kenya, isaga oo ku tilmaamay horumar weyn.
Jabuuti ayaa sidoo kale xustay inay muhiim tahay in la wada ilaaliyo nabadda iyo xasiloonoda gobolka oo dhan.
Soomaaliya ayaa xalay warqad u dirtay Kenya, taas oo ay ku shaacisay inay dooneyso dib usoo nooleynta xidhiidhka labada dal, si dib loogu furo safaaradaha labada dowladood oo wax shaqo ah aan qaban bilooyinkii u dambeeyay.
Labadan dowladood ayaa xidhiidhkooda xumaa Afartii bil ee ugu dambeysay, waxaana Kenya ay joojisay duulimaayada inkastoo ay markale dib u furtay, halka Soomaaliya ay iyana horey u joojisay qaadkii faraha badnaa ee maalin weliba laga soo daabuli jiray dalka Kenya.
Waxaana dhanka kale saakay si rasmi ah u billowday duulimaadyada diyaaradaha ee Soomaaliya iyo Kenya, kuwaa oo u kala socdaalaya Nairobi iyo Muqdisho.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2020/12/EJVxlHdXsAASaON.jpg 1365 2048 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2021-06-13 13:00:062021-06-13 13:00:06Dawladda Jabuuti oo isha ku haysa xidhiidhka Soomaalia iyo Kenya oo dib u soo laabtay.
Nin ku dilay i dawee lama yidhaahdo Gumaadkii Ciiddamadda Itoobia iyo kuwa canfartu u geysteen shacabka Soomaaliyeed...